3829 Gawaarida Gawaarida Gawaarida ...
2716 Dhagxaanta Dhagxaanta ...
HSL-CNC3826 Mashiinka Mashiinka Dhalada ah
Moodelkani waa mashiin goynta dhalada, kaas oo isku daraya muraayad otomaatig ah oo toos ah iyo mashiinka goynta otomaatiga ah. Waxay ku habboon tahay goynta toosan oo qaabaysan ee muraayadda dhismaha, qurxinta, qalabka guriga, muraayadaha, iyo farshaxannada.
HSL-YTJ2621 Mashiinka Mashiinka Dhalada ah
Moodelkani waa mashiin goynta galaaska, kaas oo isku daraya buuxinta dhalada tooska ah, calaamadeynta otomaatiga ah, shaqada gacanta telescopic, iyo mashiinka goynta otomaatiga ah. Waxay ku habboon tahay goynta toosan oo qaabaysan ee muraayadda dhismaha, qurxinta, qalabka guriga, muraayadaha, iyo farshaxannada.
HSL-YTJ3826 Mashiinka Mashiinka Goynta Tooska ah + HSL-BPT3826 Shaashadda Jabinta Koobka
Nooca Cusub ee Tooska ah ee Tooska ah ee Beveling Edge Glass Mashiinka Mashiinka oo leh Sideed Mashiinka Mashiinka
Macluumaadka Badeecada & Xaashida Xaashida EXW qiimaha 65000 RMB Taariikhda 2020/12/9 ansax ah Oraahdu waxay ansax noqon doontaa 30 maalmood. Bixinta T / T. Baako & gaarsiinta kiiska alwaax Standard; 30 maalmood (1200RMB) Halbeegga Shayga 1: Nooca cusub ee khadka tooska ah ee tooska ah ee tooska ah ee muraayadda muraayadda mashiinka leh oo leh sideed madax wax lagu shiido Model 9001-8 Dimension 3700 * 1300 * 1700mm Miisaanka 1400kg Max qiyaasta waxsoosaarka 200cm * 200cm Xajmiga waxsoosaarka 4cm * 4cm Qiyaasta wax soo saarka dhalada 3mm-12 m ...
Sheegista Mashiinka Mashiinka Dhalada - RMB
Nooca Mashiinka: Mashiinka Mashiinka Dhalada
Cabbir (L * W * H): 3600X2200X1700 (miiska 800) mm
Qalabka Muraayadda Sare ee Double Edger
Mashiinka muraayadda sare ee saxda ah ee muraayadda sare ayaa ku habboon in lagu shiido galaas fidsan oo leh laba dhinac oo toosan.
Shiidi qallafsan, shiidi ganaax, xagal nabadgelyo qiraan (wheel rakibay ammaanka) rakibay markii la dhammeeyo.
Mashiinka duudduuban ee ku jiidaya hagaha labalaabka tooska ah, labalaabka kubbadda kubbadda si aad u gaarto xawaare dhaqaaqo xasiloon, baabi'inta nadiifinta moobiilka, yareynta iska caabinta iyo isqabqabsiga, si loo hubiyo meeleynta soo noqnoqda.
2716 Mashiinka Mashiinka Dhagaxa ah
Cilmi baaris buuxda iyo horumarin, qaabeyn, wax soo saar, waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida gaarka ah ee dadka isticmaala.
Qaado shaashadda bandhigga warshadaha HD, aluminium aluminium qolof ah, qarxa-caddeyn, boodh-la'aan, nolol adeeg dheer leh. Muuqaal ballaadhan oo aad u ballaadhan iyo xagal muuqaal sare leh.
3829 Mashiinka Gawaarida otomaatiga ah iyo Mashiinka Goynta
Sharaxaad Cilmi-baaris iyo horumarin buuxda oo madax-bannaan, naqshadeyn, soo-saar, ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida gaarka ah ee dadka isticmaala. 6mm qaro weyn 6061 aluminium warshad xoog leh si loo soo saaro walbahaarka gudaha, si loo hubiyo nolosha adeegga iyo awoodda xamuulka ee aluminium, dusha sare ee mashiinka mashiinka wax lagu shiido, si loo hubiyo isku dheelitirka iyo toosnaanta dusha sare ee rakibidda, hagaajinta saxnaanta Qaado heer qaran oo adag ...
3826 Khadadka goynta dhalada otomaatiga ah
Caqli ， xawaare sare leh stability xasillooni wanaagsan, nabadgelyo iyo sahlanaan, badbaadinta xoogga iyo waxtarka sare Moodooyinka ayaa loo habeyn karaa: Khadka goynta muraayadaha xawaaraha sare leh ee garaadka leh wuxuu ka kooban yahay miis sibraar toos ah u rakibaya, mashiinka mashiinka wax lagu gooyo oo toos ah iyo miiska jebinta otomaatigga ah. Waa nooc ka mid ah nidaamka goynta dhalada oo otomaatig ah oo si otomaatig ah u raraya, jaangoynta noocyada otomaatiga ah iyo goynta shaqooyinka mid ka mid ah. Khadka goynta caqliga leh wuxuu leeyahay faa'iidooyinka xasilloonida wanaagsan, amniga iyo ku habboonaanta, sa ...
3616 Mashiinka goynta dhagxaanta
Meeleynta tooska ah ee laser, iskaanka sawirada, calaamadeynta otomaatiga ah, xariiqa toosan & goynta qaababka qaaska ah, saxnaanta goynta sare, xawaaraha goynta degdegga ah, nolosha adeegga muddada dheer, ma isticmaalno